jokerbank, Author at Cele Channel
June 28, 2019 jokerbank	0 Comments
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အဟော့ဆုံးသတင်းတစ်ခုကတော့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို ဆရာက ကြိမ်နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆော်ပလော်တီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါ။ အရင်ဆုံး သတင်းစဖြန့်သူကတော့ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး၊ သူမကို ဆရာက ရိုက်တဲ့အကြောင်း၊ တရားစွဲပြီး ဆရာကို ထောင်ချပစ်မယ်လို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဆရာဖြစ်သူကို သတင်းမီဒီယာတွေက
ဘဏ်အကောင့်ထဲမှငွေများလက်သည်မပေါ်ပဲပျောက်သွားခြင်း မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ဖုန်းဘေဖြည့်ဖို့ Cb pay app ထဲလည်းဝင်လိုက်ရော ငွေတွေဖြတ်ထားတာ Transactions တွေအများကြီး။ စုစုပေါင်း သိန်းတစ်ရာပြည့်ဖ်ို့ ၂၀၀ ပဲလိုပါတယ်။ 9990,800 ကျပ်ပါ။ Transactions 14 ကြောင်းပါ။ အဲ့ဒါနဲ့
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက တောင် နှစ်သက်သဘောကျပြီး အားကျရတဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ The Descendant of the Sun ရဲ့ စုံတွဲလေး ဆောင်းဂျွန်ကီ နဲ့ မင်းသမီးဆောင်းဟေဂျိုတို့ မကြာခင်မှာ ကွာရှင်းဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပြီး
သွေးတိုးကျဆေး Amlong5mg ရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုး…!
Amlong ဆေးဟာ Amlodipine5mg နဲ့ Amlodipine 10 mg ဆိုပြီးလာတယ်။ Angina ခေါ်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ အတွက်လဲသုံးတယ်။ Calcium-channel blockers (Calcium antagonists) အမျိုးအစားဆေးဖြစ်တယ်။
“မိုး နေ လေ မထိအောင်လို့ ထီးလေးမိုးပေးခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေ ”
June 27, 2019 June 27, 2019 jokerbank	0 Comments
-မကြွေးနိုင်ပေမဲ့ မွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိခင်။ မိုး နေ လေ မထိအောင်လို့ ထီးလေးမိုးပေးခဲ့တာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိခင်။ အပြစ်မပြောတော့ပါဘူး အရင်ဘဝ ကံတရားတည်ထောင်ခဲ့တာ ၊ခံရတဲ့အလှည့်မှာတော့ မစားသာပါဘူး။ ကံမကုန်လို့ ပြန်စုံတွေ့ရင် မိခင်ကို မိခင်လို့ပဲ ခေါ်မယ်နော်၊
တ ကမ္ဘာလုံး သိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေးဆီးချိုရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းသောဆေးနည်း မိတ်ဆွေ တို့မိသားစုဝင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် စိတ်သောကရောက်နေသူရှိလျင်ဤဆေးနည်းကို ပြောပြပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိကဲ့သို့ ဆေးဒါနပြု၍ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်ပါ။ ဆီးချို ရောဂါ အတွက် ဆေးနည်း လို အပ်သောဆေးမှာ
အသဲကွဲနေပီလား ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ပါ
အသဲကွဲနေပီလား? သင့်ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲထားလို့ဝမ်းနည်းနေလား? သင့် crush က ချစ်ရသူရှိသွားလို့ကြေကွဲနေရလား? ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ အားတင်းထားလိုက်ပါ။ (၁) သင့်ကိုချစ်တဲ့အခြားသူတွေတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် သူကသင့်ကိုမချစ်ပေမယ့် သင့်ကိုချစ်တဲ့အခြားသူတွေကိုမေ့မသွားပါနဲ့။ သင့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ (၂) စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို အင်အားအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါ သူ့ကြောင့်ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို သင့်ဘ၀အတွက်အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့
ကိုကျော်ဇင်ဝင်း ကိစ္စကို ဖြေရှင်းစကားပြောလာတဲ့ MIU Founder ဒေါ်ပို့ပို့ကြည်
အခုရက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတင်မက နိုင်ငံတကာက လူမှုကွန်ယက်တွေကိုပါ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်အောင် ကိုင်လှုပ်သွားတဲ့ Myanmar Imperial University က စာကြည့်တိုက်မှူး ကိုကျော်ဇင်ဝင်းရဲ့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရပ်ကို အားလုံးသိလိုက်ကြမှာပါ။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MIU ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာပါ။ ကိုကျော်ဇင်ဝင်းအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေဟာလည်း facebook
ဖုန်းမှားခေါ်မိရာကနေ ဖူးစာဆုံဖက်ပြီး လက်ထပ်သွားကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်
June 26, 2019 jokerbank	0 Comments
ဖူးစာဆိုတာဆန်းကြယ်လှတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို လူးလာလို့ရှိရင် ဘယ်လိုအရာတွေကမှ ဟန့်တားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ထို့အတူပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အက်စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ မျက်နှာတခုလုံး စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ပျက်စီးနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာလည်း ဖုန်းမှားခေါ်မိရာကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖူးစာဆုံဖက်ပြီး လက်ထပ်ထိမ်းမြားသွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ကြည့်မရအောင်ကို ပျက်ဆီးနေလို့ အခြားသူတွေက နင်တသက်လုံး
အလုပ်မှာ ဝိုင်းပြီးGayလို့ဝန်ခံခိုင်းခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့ မြေးလေးကို
ဂျစ်တူးလေးလို့ ကျွန်တော်တို့ စပြီးရင်းနှီးခဲ့တဲ့ညီလေး Kyaw Zin Win လူ့လောကကို စွန့်ခွာသွားပါပြီ။ သတ်သေသွား တာပါ။ အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ကွက်ချန်ပြီး Gay ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဝန်ခံခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက် လုပ်ငန်းခွင် Viber Group